Chii chinonzi nymphomania? | Inobatsira ruzivo kune wese munhu
Nymphomania inogara ichingodiwa uye yakanyanya kukosha pabonde inova yakakosha kupfuura zvimwe zvese zvinodiwa. Muvarume, chirwere chinonzi satiriasis.
Nymphomaniac mukadzi anogara achishuva kusangana pabonde. Zvepabonde kupindwa muropa kwaasingakwanise kudzora.
Kune munhu anorwara, izvi hazvina basa zvakanyanya, manzwiro emudiwa uye nehukama hwakadzama hwehukama hazviverenge. Chinhu chega chinotariswa nenymphomaniac kugutsikana kwekuchiva kwake.
Kazhinji mune vakadzi vanoonekwa kuti vane nymphomania zvakaoma kuvaka hukama hwakasimba. Kukwezva kwavo pabonde kwakakura, kusingawanikwe nevarume vazhinji, uye kunotungamira kuchinhu chekuti nymphomaniac iri kuita mukunyengera kana kunyange chipfambi.
kutya kupinda muhukama hwakakomba;
Zviratidzo zve nymphomania:
kugara uchifunga nezvebonde;
bonde nevakawanda vakaroorana;
kurara nevanhu vasina kujairika;
kugara uchiita bonhora;
kugara uchiona zvinonyadzisira;
kurasikirwa kwekutonga pamusoro pehunhu hwavo;
kugutsikana kwemuviri kwakanyanya kukosha;
kutsvaga mikana yebonde.
Mushure mekusangana, iyo nymphomaniac inonzwa kunyara, inozvigumbura uye inodemba kuti haigone kudzora muviri wayo. Anoda kuzvisunungura kubva kuchishuwo chenguva dzose, asi kuzvidzora pabonde kunokonzeresa kutsamwa, kunetseka kuisa pfungwa uye kunyange kushushikana
Kurapa nymphomania vezvepabonde vanobatanidzwa, vanogonawo kuongorora chirwere ichi. Murwere anotumirwa kurapwa kwepfungwa uye kurapwa kwemishonga. Inowanzo kukurudzirwa kutora SSRIs, antipsychotic kana antiandrogenic zvinodhaka.
Maitiro ekurapa ayo anosanganisira kuvaka hukama hwakadzama nevanhu uye kudzidza maitiro ekugadzirisa kunetseka zvinowanzobatsira. Nymphomaniac muhukama anofanirwa kuenda kumisangano nemumwe wake. Nehurombo, nymphomania haina kurapwa, sezvo paine mamiriro ezvinhu ane njodzi anogona kukonzeresa kudzoka kwechirwere.
Posted in Ukama
Mibvunzo ye52 mu database yakagadzirwa mu 0,325 masekondi.